Akanjo «frizera» «Akanjo ho an'ny efitrano mangatsiaka • amboradara solosaina P&M
Palitao mangatsiaka voamarina
Fitaovana ho an'ny mpiasa ao palitao mangatsiaka avo lenta, azo antoka, natokana hiasa amin'ny maripana ambany dia olana iray lehibe amin'ny mpampiasa. Ny fisafidianana modely mety dia fanambyindrindra raha tsy baikoina matetika ny vokatra toy izany.
Ao amin'ny magazinay, manolotra modely tsara kalitao indrindra izahay avy amin'ireo mpanamboatra azo itokisana amin'ny famokarana akanjo manokana.
Palitao mangatsiaka Hi-Glo 25 Coldstore, fiarovana hatramin'ny -64,2 ° C
palitao vata fampangatsiahana Ireo maodely ireo dia misy amin'ny karazany samihafa, izay mampiavaka azy ireo amin'ny hafa dia ny endrika, ny vidiny ary ny tanjona. Noho ny tanjon'izy ireo manokana amin'ny zaitra, fitaovana tsara kalitao no nampiasaina ary famaranana marina no nampiasaina.
Izany rehetra izany dia hiarovana mafy ny mpiasa sy hanompo mandritra ny taona maro. Ny iray amin'ireo maodely malaza indrindra dia ny palitao Hi-Glo 25 Coldstore izay manome fiarovana hatramin'ny -64,2 ° C (sary), miaraka amina rafitra maoderina 5-layer, natao hamandrihana rivotra maro.
Ilay palitao voalaza dia mahafeno ny fenitra EN342, izay ahafahana mampiasa azy amin'ny trano fitobiana miaraka amin'ny maripana hatramin'ny -64,2 ° C. Na izany aza, ny maodelin'ny palitao izay arosonay, izay tena miaro indrindra, dia miaro amin'ny toe-javatra iasana hatramin'ny -83,3 ° C mandritra ny adiny 1 miaraka amin'ny hetsika antonony, ary hatramin'ny -44,01 ° C mandritra ny 8 ora miaraka amin'ny hetsika antonony.
Ireo soatoavina ireo dia mihatra raha ny palitao sy pataloha Hi-Glo 40 zezika miara-tonta.
Palitao mangatsiaka CS-10 Coldstore, fiarovana hatramin'ny -25 degre C.
Ny mpamokatra dia nifantoka tamin'ny kalitao farany tsara sy farany. Ny akanjo mifanaraka amin'ny fenitra EN 342 dia manome fiarovana tsara amin'ny maripana ambany indrindra. Ny fiasa amin'ny tontolo mangatsiaka dia miavaka amin'ny mari-pana mitovy na ambany noho ny -5 ℃. Zava-dehibe ny tsy avela ho lena ny akanjo - ny hamandoana na ny tondra-drano dia mety hisy vokany tsy mahafinaritra.
Ny palitao mangatsiaka misy amin'ny refy isan-karazany dia midika fa afaka mahita akanjo mora mifanaraka tsara aminao ianao. Ny fividianana akanjo mafy orina dia fampiasam-bola mahasoa. Manaraka ny tolo-kevitr'ireo mpanamboatra azy dia hametraka hatrany ny tanjon'ny fitazonana ny fananany mandritra ny taona maro, izay nohamafisin'ireo tompona orinasa lehibe sy ireo mpampiasa azy ireo mihitsy.
Palitao fitehirizana allegrohatsiaka mangatsiakakurtkaPalitao mangatsiakapalitao ho an'ny maripana ambanyPalitao Hi-Glo - 40 degrepalitao miaropalitao taratra ho an'ny efitrano mangatsiakapalitao insulation termalpalitao voamarinapalitao mangatsiakapalitao mangatsiaka
P&M Zo rehetra voatokana 2021